(၇၃) နှစ်မြောက် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပျာ်ရွှင်ကြည်နူးစွာငါးလွှတ်ကုသိုလ်ယူရင်းနဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းကိုခံစားနေတဲ့ နေခြည်ဦး – Cele Top Stars
(၇၃) နှစ်မြောက် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပျာ်ရွှင်ကြည်နူးစွာငါးလွှတ်ကုသိုလ်ယူရင်းနဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းကိုခံစားနေတဲ့ နေခြည်ဦး
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ထူးခြားတဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းကြောင့် အနုပညာလောကမှာ တစ်ရှိန်ထိုး နာမည်ရလာပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အားပေးသူပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိလာသူလေးကတော့ Beauty Blogger မင်းသမီးချောလေး နေခြည်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးကတော့ အခုဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ထိပ်ဆုံးကနေ ရည်တည်နေပြီး သွက်လက်ချက်ချာပြီး ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့ ပုံစံလေးကြောင့် အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကလည်း ချစ်ခင်ခြင်းခံရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးကတော့ ဒီကနေ့ (၇၃) နှစ်မြောက် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ငါးလွှတ်ကုသိုလ်ယူရင်းနဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုကိုခံစားနေကြောင်း ပြောလာပါတယ်။
“Happy 73rd Myanmar Independence Day 🇲🇲 နေခြည်တို့နိုင်ငံကြီး လွတ်လပ်သောအမိမြေ ဖြစ်တာ ၇၃ နှစ်တောင် ရှိခဲ့ပြီ။ နေခြည်တို့ကော လွတ်လပ်သော လူသားတွေ ဖြစ်နေကြရဲ့လား? လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီလား? နေခြည်ကတော့ I’mafree spirit and soul and I own my body. ဒါကြောင့် လွတ်လပ်ခြင်းကို celebrate လုပ်တဲ့ ဒီနေ့ကို နေခြည်အရမ်းပျော်တယ်။ နေခြည်တို့ နိုင်ငံကြီးလည်း ၂၀၂၁ မှာ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း.. ချစ်တဲ့​နေခြည်” ဆိုပြီး နှစ်သစ်ဆုတောင်းစကားလေး ပြောလာပါတယ်။
Beauty Blogger မင်းသမီးချောလေး နေခြည်ဦးကတော့ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ငါးလွှတ်ကုသိုလ်ယူခဲ့သလို အလုပ်တွေနားတဲ့ တစ်နေ့တာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း ဒီကနေ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်နဲ့ ပေါ့ပါးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ချစ် ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။
ခဈြပရိသတျကွီးရေ ထူးခွားတဲ့ အနုပညာအရညျအခငျြးကွောငျ့ အနုပညာလောကမှာ တဈရှိနျထိုး နာမညျရလာပွီး တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ အားပေးသူပရိသတျအခိုငျအမာရရှိလာသူလေးကတော့ Beauty Blogger မငျးသမီးခြောလေး နခွေညျဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ နခွေညျဦးကတော့ အခုဆိုရငျ အောငျမွငျတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျအဖွဈ ထိပျဆုံးကနေ ရညျတညျနပွေီး သှကျလကျခကျြခြာပွီး ထကျထကျမွကျမွကျရှိတဲ့ ပုံစံလေးကွောငျ့ အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးတဈခုလုံးကလညျး ခဈြခငျခွငျးခံရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နခွေညျဦးကတော့ ဒီကနေ့ (၇၃) နှဈမွောကျ မွနျမာ့လှတျလပျရေးနမှေ့ာ ငါးလှတျကုသိုလျယူရငျးနဲ့ လှတျလပျခွငျးရဲ့ ပြျောရှငျကွညျနူးမှုကိုခံစားနကွေောငျး ပွောလာပါတယျ။
“Happy 73rd Myanmar Independence Day 🇲🇲 နခွေညျတို့နိုငျငံကွီး လှတျလပျသောအမိမွေ ဖွဈတာ ၇၃ နှဈတောငျ ရှိခဲ့ပွီ။ နခွေညျတို့ကော လှတျလပျသော လူသားတှေ ဖွဈနကွေရဲ့လား? လှတျလပျစှာ တှေးချေါပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို အပွညျ့အဝပိုငျဆိုငျနိုငျပွီလား? နခွေညျကတော့ I’mafree spirit and soul and I own my body. ဒါကွောငျ့ လှတျလပျခွငျးကို celebrate လုပျတဲ့ ဒီနကေို့ နခွေညျအရမျးပြျောတယျ။ နခွေညျတို့ နိုငျငံကွီးလညျး ၂၀၂၁ မှာ အစစ အရာရာ အဆငျပွခြေောမှပေ့ါစလေို့ ဆုတောငျးရငျး.. ခဈြတဲ့​နခွေညျ” ဆိုပွီး နှဈသဈဆုတောငျးစကားလေး ပွောလာပါတယျ။
Beauty Blogger မငျးသမီးခြောလေး နခွေညျဦးကတော့ လှတျလပျရေးနမှေ့ာ ငါးလှတျကုသိုလျယူခဲ့သလို အလုပျတှနေားတဲ့ တဈနတေ့ာကို လှတျလှတျလပျလပျနဲ့ ဖွတျသနျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကလညျး ဒီကနေ့ လှတျလပျရေးနမှေ့ာ စိတျလှတျကိုယျလှတျနဲ့ ပေါ့ပါးပြျောရှငျနိုငျကွပါစနေျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ခဈြ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော…။
ကိုဗစ်ကာလမှာ ချစ်သမီးလေးနဲ့ အတူတူ မုန့်လုပ်နည်းတွေသင်ရင်း အကျိုးရှိရှိ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ လင်းဇာနည်ဇော် ….
လွတ်လပ်ရေးနေတွင် နိုင်ငံတော်ကပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရဘွဲ့တံဆိပ်ကို ထပ်မံရရှိခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ ခန့်စည်သူ